Iiraan oo sheegtay inay xukun dil ah ku xukuntay rag la shaqeynayay CIA-da Mareykanka – Radio Daljir
Luulyo 23, 2019 7:08 b 0
Iiraan ayaa sheegtay inay qabatay 17- basaas oo la shaqaynayay hay’adda sirdoonka Mareykanka ee CIA, qaybtoodna ay ku xukuntay dil toogasho, sida uu sheegay sarkaal u hadlay Iiraan.
Hay’adaha ammaanka ee Iiraan ayaa qabqabtay shabakad basaas ah oo la shaqaynayay CIA-da.
Dadkan ayaa loo gudbiyay hya’adaha garsoorka ee Iiraan, kuwaasi oo qayb ka mid ah ku xukumay dol toogasho.
Madaxwaynaha Mareykanka Donalad Trump ayaa beeniyay sheegashada Iiraan, isagoona ku tilmaamay been abuur.
“Warka Iiraan ee ah inay qabatay rag katirsan CIAda waa been abuur” ayuu kusoo qoray boggiisa Twitterka.
“Waa been aan sal lahayn, waxaana ay la mid tahay dacaayadda Iiraan ee ay ka mid ahayd inay soo rideen diyaarad aan cidnka wadin, waxaana maamulka diinta kusalaysan uu umuuqdaa mid gabigiisa guul daraystay oo aan la hayn fikrad uu wax ku qabto” ayuu sii raaciyay.
Iiraan ayaa sheegtay dadka la xukumay inay basaaseyaan xarumaha militariga iyo goobaha Nuclearka ee dalkeeda.
Xiisadda Iiraan iyo dowladaha reer galbeedka ayaa cirka isku sii sharayraysa iyadoona laga digayo dagaal inuu ka dhex qarxo.
Wargeyska The New York Times oo warbixin xiiso leh ka qoray loolanka Khaliijka, Qadar iyo qaraxyada Bossaso